02.03 Hery sy fahefana avy amin'i Jeso
Ny sakafom-panahintsika anio Zoma 02 Marsa 2018 dia ny Lioka 9.1-9, no teny hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' io teny io ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
1 Ary Jeso niantso ny roa ambin’ ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina.
2 Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan’ Andriamanitra sy hahasitrana ny marary.
3 Ary hoy izy taminy : Aza mitondra zavatra ho amin’ ny alehanareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa.
5 Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin’ izany tanàna izany hianareo, dia ahintsano ny vovoka ho afaka amin’ ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy.
6 Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitory ny filazan-tsara sy nahasitrana teny tontolo eny.
Ny fisalasalan’ i Heroda, raha nandre ny fahagagana nataon’ i Jeso
7 Ary Heroda mpanapaka nandre izay rehetra natao; dia very hevitra izy noho ny filazan’ ny olona; fa hoy ny sasany : Jaona no efa nitsangana tamin’ ny maty;
8 ary hoy ny sasany: Elia no efa niseho; fa hoy kosa ny sasany : Ny anankiray amin’ ny mpaminany fahiny no efa nitsangana.
9 Fa hoy Heroda : Raha Jaona, dia izaho no efa nanapaka ny lohany; fa iza indray moa Izao, izay reko fa manao izany zavatra izany ? Ary izy nitady hahita Azy.
HERY SY FAHEFANA AVY AMIN’I JESO
Ny Mpianatr’i Jeso dia nahazo hery sy fahefana avy aminy ho afaka mandroaka ny demonia rehetra sy manala ny areti-mandringana ary manasitrana (1).
Nahazo iraka hitory ny Filazan-tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra koa izy ireo (2).
Tsy navelan’i Jeso hitondra entana betsaka mety hanelingelina ny lalana haleha na akanjo roa na vola akory aza izy ireo (3).
Azon’ny Tompo antoka fa efa misy ny olona afaka mandray sy mamatsy azy ireo any an-toerana.
Ilaina koa isika mpitory ny filazan-tsara miankin-doha, sy mahay miara-miasa amin’ny olona eo amin’ny tanàna hanaovana ny asan’Tompo.
Mila mahatoky Azy.
Tsara ho fantatra koa anefa, fa misy ny tsy te-handray (5), ka tsy tokony ho kivy isika raha sendra ny toy izany amin’izay itoriantsika, efa nahazo ireo mpianatra tany aloha koa izany.
Teto ny mpianatra dia nanatanteraka an-tsakany sy andavany ireo iraka nampanaovin’i Jeso. Ary nitety ny vohitra samihafa.
Nisy ny vokatra : nahasitrana sy namoaka demonia.
Talanjona ny olona hatramin’ny Heroda mpanapaka, ka te hahalala an’i Jeso.
Ary isika manao ahoana ?
Efa nandrotsaka ny Fanahy Masina ho antsika koa i Jeso ka nanome fahefana antsika hanasitrana sy hanala ny fanangejana ataon’ny demonia amin’ny olona.
Efa namita ny iraka ve sa misy tsy vita ?
Ny Filazan-tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra tokoa ve no notoriana sa sanatria mitory tena ? Raha tena feno ny Fanahy Masina isika dia tsy maintsy misy akony amin’ny fiainan’ny manodidina antsika ny asa nampanaoviny.
Manafaka ny olona voagejan’ny asan’ny demonia, manasitrana ary mahataona olona maro ahafantatra an’i Jeso hiverina ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Hamaranantsika itý Mana androany Zoma itý dia hivavaka ho an'ny asa fitoriana any amin'ireo faritra sarotra idiran'ny filazan-tsara isika ary dia hivavaka ho an'ireo izay mijaly, sy ampahoriana noho ny finoany an'i Jesoa Kristy.